Aethercast paUbuntu Kubata, nhanho nyowani yekuchinja | Linux Vakapindwa muropa
Ubuntu yawana imwe nhanho yakanangana nekubatana, ichigadzira iyo Ubuntu Kubata maturusi akadai seNexus 5 uye One Plus Imwe mutendeuki pamwe nekutenda kuAethercast tekinoroji, chimwe chinhu chakatowanikwa neMeixu Pro 5.
Vhiki rapfuura takataura nezvazvo Meixu Pro 5 yakanga yakabatana zvisina waya kuchiratidziri, kuigadzira iro rakashandurwa kuita desktop Ubuntu. Zvakanaka izvozvi zvakaziviswa kuti izvi zviri kushandiswazve pane mamwe madhijitari ane Ubuntu Kubata, senge iyo Nexus 5 uye One Plus Imwe.
Izvi zvinowanikwa nekuda kweetekinoroji yeAethercast, hunyanzvi hwakatanga kugadzirwa gore rapfuura uye izvo zvinokutendera iwe kuti ubatanidze zvisina waya chimbo kune mutariri kana terevhizheni. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyi tekinoroji, ndinokutaurisa kune chinyorwa kubva kune vedu Ubuntlog vatinoshanda navo Izvo zvinotsanangura chaizvo.
Iyi tekinoroji iyo inobvumidza izvo zvatakatoona muMeixu Pro 5Mune mamwe mazwi, kushandura aya madhijitari kuita desktop Ubuntu nema windows ayo, zvirongwa zvaro, uye pakupedzisira, pachezvako komputa nerubatsiro rweiyo isina waya keyboard uye mbeva.
Zviri pachena 100% kusangana hakuna kuzadzikiswa, asi rave riri danho rakakura kumberi kana zvasvika pakuzvizadzisa, nekuti sezvandinogara ndichitaura, nhare dzanhasi dzine simba rinopfuura rakaringana rekushandisa desktop desktop.
Iko kuvandudzwa kwetekinoroji yeAethercast mune izvi zviviri zvishandiso kubva pasimba kuenda pasimba, asi kwete kugadzikana parizvino. Nekuda kweiyo Nexus 5, yakatogadzirwa uye yave kuda kugadzikana, kune rumwe rutivi, mune iyo One Plus Imwe, kuchine imwe nzira yekuenda kuti uzviite.
Izvi zvinotarisirwawo ibudirire nemamwe maUbuntu Kubata zvishandiso seBQ, chimwe chinhu chingave kumberi kukuru mune iyi yekubatana kwemidziyo.
Pakupedzisira, ndinofunga Canonical iyo hondo yekutendeuka iri kukunda, nekuti haingoshanda chete neSmartphone, asi BQ mapiritsi anogona zvakare kushandiswa sekunge yaive desktop desktop neUbuntu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Aethercast pane Ubuntu Kubata, nhanho nyowani yakanangana nekubatana
kumberi kwazvo canonical
Manjaro Linux 16.06 inowanikwa kugadzirisa